Kitapo mivalona miresaka momba ny làlam-pifamoivoizana China Manufacturer
Home > Products > Hazo fanondronam-bolo > Kitapo mivalona miresaka momba ny làlam-pifamoivoizana
LASY FANASOAN'NY CHIYE
Ny fitaratra fitaratra fanenon-damba no fomba mahazatra indrindra maneho ny fahazavana. Vola madinika vitsy an'arivony voarakitra ao anaty loko mifamoivoy no mahatonga azy hamiratra rehefa hitan'ny jiro ny fiara. Noho ny endrik'izy ireo sy ny fahamendrehany, ny jiro tsirairay dia maneho ny fahazavana miverina amin'ny loharano.
Ny endriky ny fitaratra fitaratra dia natao mba hampidirina amin'ny loko fanangonana fifamoivoizana mba hanamboarana azy. Ny fampidirana ireo siramamy miroborobo ireo dia misy fiantraikany goavana amin'ny fotoam-pahibemaso amin'ny alina sy ny marika. Ny tahan'ny fampiharana isaky ny 6 litatra isaky ny lavarangan'ny loto momba ny fifamoivoizana. Ny kilaoty dia tokony hipetaka eo amin'ny loko misy loko na thermoplastika mafana. Manome fiheverana goavana izy ireo amin'ny toe-javatra mafana na maina. Ireo dia ireo kavina izay ho hitanao amin'ny alina eo amin'ny làlambe midina an-kalamanjana. Ny kiraro fitaratra dia azo ampiasaina amin'ny karazana fampiharana maro hafa izay ahafahana miresaka. Isaky ny mizara amin'ny loko marefo izy ireo dia lasa mandanjalanja. Lasa malaza amin'ny fampiharana karazan'antokon'izy ireo izy ireo.
Kitapo Glass ho famantarana famantarana
Kitaposin'ny Glass pour Paint Paint